EUR - hal hanti, faa&#39;iido deggan | vfxAlert official blog
EUR - hal hanti, faa&#39;iido deggan
Ka fikirida sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , kuwa bilowga ah waxay rabaan inay daboolaan wax walba, inta hanti, xeelado iyo calaamado badan intii suurtogal ah. Khibrad la’aan, tani kaliya waxay u horseedaa khasaaro. Faa'iido badan ayaa lagu heli karaa iyadoo laga ganacsado hal hanti oo keliya, sida EUR / USD - oo ah lacagta ugu muhiimsan ee suuqa sarrifka.
Donchian Channel (DC) waa jihada jiifka ah ee khadadka DC ee xaqiijinaya jiritaanka guri, burburka khadadka dhexe wuxuu noqon doonaa calaamadda binary ee dhamaadka. Haddii baaxaddu ballaadhan tahay, waad furi kartaa xulashooyin aad dib uga laaban karto xuduudaha. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
Tilmaamaha Donchian laguma darin aasaasiga aasaasiga ah ee meheradaha ganacsiga. Laakiin si fudud ayaa bilaash looga heli karaa internetka.
Heerka Xilliga Dhaqdhaqaaqa 'Stochastic Momentum Index' (SMI) waa fasiraad xiiso leh oo loo yaqaan 'Stochastic Oscillator'. Nooca caadiga ah, wuxuu xisaabiyaa sida ugu dhow qiimaha hadda jira. Dhanka kale, SMI waxay muujineysaa sida ay ugu dhowdahay barta dhexe ee heerka kala duwan ee Sare / Hoose oo sidaa si ka sii fiican loo hagaajiyay. Tilmaamuhu waa laga ganacsadaa, sida caadiga ah ee 'Stochastic': ka bixida xad dhaafka / badbinta, kala-duwanaanta. Laguma darin dhammaan boosteejooyinka ganacsiga!
Ikhtiyaar u kac (WAC). Qiimuhu wuxuu ka durkay xadka hoose ee Channel Donchian ama wuxuu jabayaa khadka dhexe ee hoose ilaa kor. Heerka Xilliga 'Stochastic Momentum Index' wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber ama aagga la iibsaday.
FALL (PUT) option. Xaaladaha ka soo horjeedka - sicirka kama badin xadka kore ee Channel Donchian ama wuxuu jabiyaa dhexda kor ilaa hoos. Heerka Saadaasha 'Stochastic Momentum Index' sidoo kale wuxuu hoos ugu sii dhacayaa kormeerkiisa.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary . Waqtiga dhicitaanka ee xulashooyinku waa inaysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii waqti cayiman la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
'Cidhiidhiga' kanaalka Donchian, ayaa sare u sii qaadista suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog leh ka dib dhammaystir buuxa. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xuduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood, haddii kale, ikhtiyaarrada ayaa noqon doona mid aan faa'iido lahayn, xitaa haddii calaamadaha binary ee bilaashka ahi ay muujinayaan jihada saxda ah.
Waqtiga dhicitaanka waa la kordhin karaa ilaa 5-7 daqiiqo haddii isbeddelka joogtada ah la arko. Sidoo kale, inta lagu jiro xilliyadaas oo kale, waxaa suurtagal ah in la furo dhowr ikhtiyaar oo leh waqtiyo kala duwan oo ansax ah si looga qaado ugu badnaan dhaqdhaqaaqa halista ugu yar. Haddii dallaalku fursad u siiyo inuu xiro ikhtiyaarka illaa uu ka dhacayo, markaa hubaal waxaan hagaajineynaa macaamilka (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadda ganacsiga ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah!
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda, ganacsatada taxaddarka leh ayaa xiri kara heshiisyada hadda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah!
Hadaad sifiican ufiiriso jaantuska, waxaad arki doontaa in had iyo jeer shuruudaha xulashooyinka aysan kicin isla waqtigaas isla markaana uu jiro farqi u dhexeeya calaamadaha. Sidee lacag looga sameeyaa xulashooyinka ikhtiyaariga ah : sug ama wali gali calaamadaha ugu horreeya ee dib u noqoshada? Calaamadee ayaa noqon doonta calaamadda hogaamineysa?
Ma jirto jawaab cad; waxaas oo dhami waxay kuxiranyihiin astaamaha hantida, waqtiga iyo xaalada hada jirta. Laakiin haddii aad tahay qof bilow ah, waxaad u baahan tahay inaad sugto dhammaan shuruudaha istiraatiijiyadda in la buuxiyo. Kahor intaadan isticmaalin calaamadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo "aan dhammaystirnayn", waxaan kugula talineynaa inaad sugto xaqiijinta vfxAlert ka dibna aan eegno gobolka Donchian Channel, ee ugu dambeeya SMI. Haddii qiimaha uu ku soo laabtay kanaalka oo uu u dhow yahay khadka dhexe, hubi in dhaqdhaqaaqu sii socdo, gal ugu yaraan shumaca xiga / hoose ee celceliska Donchian.